नेपाल प्रहरीमा कसको तलब कति ? - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com नेपाल प्रहरीमा कसको तलब कति ? - नागरिक रैबार
काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलब तय भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ तलब संरचना मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । निजामति कर्मचारीसँगै सुरक्षा निकायका कर्मचारीको तलब पनि वृद्धि भएको छ ।
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनदेखि अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायका रुपमा रहेको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजी)को तलब नेपाल सरकारका सचिवसरह छ । प्रहरी महानिरीक्षकको तलब ६४ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ छ । प्रहरीमा सबैभन्दा कम तलब फलोवर्स (सयस) समेतको (१० ग्रेड भएका)को तलब २५ हजार ९ सय ७० छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकदेखि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको तलब निम्नानुसार छ।
धनगढीको बजेट ‘कपीपेस्ट’, शिर्षक पनि गत र चालु बर्षकै हुवहु सारियो
धनगढी : धनगढी उप–महानगरपालिकाले बुधवार आगामी आर्थिक बर्षका लागि डेढ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। उप–महानगरपालिकाकी उप मेयर सुशिला मिश्र भट्टले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि एक अर्ब ६३ करोड ८२ लाख बराबरको बजेट पाँचौ नगर सभामा पेश गरिन्। प्रस्तुत बजेट अनुसार चालु तर्फ ८५ करोड र पूँजीगत तर्फ ७८ करोड ८२ लाख रहेको छ। […]